मेरो घडी | Nagarik News - Nepal Republic Media
भित्तामा बसेका छौ अडी
बेला बताउने मेरो घडी
टिकटिक गर्दै तिमी चल्छौ
समय भयो अब उठ भन्छौ।
सेकेन्ड, मिनेट र घन्टा सुई
राम्ररी हेरेको तिमीले खै ?
समयमै चल्छन् तिनीहरू सब
तिमीले पनि यो बुझ्नु छ अब।
गएको समय फेरि आउँदैन
गएपछि एकपल्ट पाउँदैन
कसैलाई नि पर्खंदैन यसले
समात्न सक्छ यसलाई कस्ले ?
होइन यो भोलिको भक्त
कुनैमा हुँदैन यो आसक्त
खुरुखुरु नदी जस्तै बग्छ
ठूलासानासँग कहाँ डग्छ ?
समयको महिमा यस्तो छ
निस्किएको बोली जस्तो छ
यसलाई नचिने सधैँ पछाडि
समय चिन्ने हुन्छ अगाडि।
आजको समय खेर गए
पढ्नुभन्दा खेल्नु धेरै भए
सुनौलो सपना नासिन्छ
भविष्य हाम्रो मासिन्छ।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७६ ०९:०० शनिबार